के सही के गलत? - प्रश्नहरुमा रुमल्लीएका थप प्रश्नहरु - MeroReport
Posted by कामाक्षी शर्मा on May 11, 2017 at 4:00pm
धेरैतीरबाट अनगिन्ती प्रश्न सुनेपछी, अनौठा अनौठा व्यवहार देखे भोगेपछी हिजोआज लाग्न थालेको छ साच्चिकै के सहि हो? र के गलत हो ? सही र गलत कसले निर्धारण गर्छ? मनमा मडारिने यि केही प्रश्नको उत्तर कोसँग हुन्छ होला ? थाहा छैन । अनेकौ घटना दिन प्रतिदिन हामीले भोग्दै अथवा सामना गर्दै आइरहेका हुन्छौ । तर ती घटनाहरुमा को पात्र सहि थियो र को गलत थियो भने न मसँग उत्तर छ न त कसैले मलाई उत्तर दिनसक्छ । यस्तो लाग्छ हामी सबैसँग प्रश्न छन् तर प्रश्नको सही र चित्तबुझ्दो उत्तर छैनन् ।
मलाई सताईरहने एउटा घटना सुनाउँदैछु । म एकहप्ता अघि दांग जिल्लाको तुलसीपुर गएकी थिएँ । दांग जानेबेलामा म अत्यन्तै उत्साहित थिएँ । म त्यहाँ मेरो साथीलाई भेट्न जाँदै थिएँ । हामी तीनहप्तापछी भेट्दै थियौ । तर मलाई तीन महिनापछी भेट हुदैछ जस्तो लागिरहेको थियो । मनमा उत्साह थियो । उ मेरी मिल्ने साथी थिई । त्यसैले मेरो मन नेपालगञ्जमा हुँदा पनि दांग पुगीसकेको हुन्थ्यो । छोटो बाटो पनि लामो लागिरहेको थियो ।
दांगमा हाम्रो भेटपछी रमाईलो शुरु भैसकेको थियो । शनिबारको दिन साथीभाईको मस्ती । हामी दुबैजना सिनेमा मन पराउछौ । बजारमा बाहुबली २ को चर्चामात्र थियो । मैले त यस अघि नै बाहुबली २ हेरिसकेको थिएँ । तर साथीका लागि म त्यो दिन समेत गरेर तेश्रो पटक बाहुबली २ हेर्न तयार थिएँ । सिनेमा थियो पनि राम्रो ।
सबभन्दा रमाईलो त त्यतिबेला भयो की जब हामी बिष्णु सिनेमा हलमा छिर्यौ । हल हो की गोदाम छुट्याउन मुस्किल भयो । किनभने मैले यसअघि नेपालगञ्जमा धेरै सिनेमा सानदार हल र पर्दामा हेरेकी थिएँ । नेपालगञ्जमा QFX द्वारा सञ्चालित हल थियो । तर तुल्सीपुरको हल पुरानै प्रविधी र सजावटमा थियो । तर साथीसँगको भेटघाट बिशेष हुनलाई त्यस्ता कुराले महत्व राख्दा रहेछन् । हामी बिन्दास शैलीमा बाहुबली २ सिनेमामा डुब्यौ । तर बेलाबेला पर्दामा केही नदेखिँदा र नबुझिने बेलामा म साथीलाई सिनेमाको त्यो भाग बुझाउँथे जुन पर्दाकै कारणले बुझिदैनथ्यो । रपनि रमाईलोसँगै हाम्रो हाँसोको ग्राफ उकासिदो क्रममा थियो । तर मलाई हामीभन्दा पछाडिबाट भैरहेका गतिबिधीले बेलाबेला झस्काईरहेको थियो । पछँडिबाट कसैले मेरो सिट हल्लाईरहेको थियो । सिनेमा चलिरहेकै बेला हल्ला भैरहेको थियो । हल्लासँग केही अपाच्य हुनेगरी व्यवहार पनि भैरहेको थियो ।
हाम्रो सिटको वरिपरि कोहि थिएनन । तर हाम्रो सिटको पछाडी भने केटाहरुको समूह थियो । केटाहरुले जे गरिरहेका थिए त्यसले मलाई असहज बनाईरहेको थियो ।
‘हेर्न मलाई यहाँ त पानी पो पर्यो,’ । हलभित्र ध्यानपुर्वक सिनेमा हेरिरहेका बेला मेरो मुखबाट निस्केको कुराले साथी अचम्ममा परि । उसले भनि, ‘कहाँ बाट?’
मैले भने- ‘पछाडीबस्ने एउटा केटाले हात धोयो ।’
हामीले केही प्रतिकृया जनाएनौ उल्टो हाँस्यौमात्र ।
हाम्रो ध्यान फेरी बाहुबली २ मा नै केन्द्रित भयो ।
बाहिर हाँसे पनि मेरो मन भने एकतमासले बेचैन थियो ।
फेरी एक छिनपछि मैले भने, ‘आज म यो हाल बाट बाहिर निस्कँदा त रातै हुन्छु होला ।’
साथीले सोधि ‘किन ?’
मैले भने- ‘पछाडी एउटा केटाले गुड़का / कमलापसंद / श्याम्बार खाएर थुक्कि र छ .’
फेरी हामीले आफ्नो ध्यान सिनेमातीर मोड्यौ ।
केटाहरुमध्ये एउटा केटाको व्यवहार तेतिमा रोकिएन । फेरि एक छिन् पछि त्यो केटाले कुल्ला गरेर मेरो अगाडी नै थुक्यो . किन कि हाम्रो अगाडी कोहि पनि बसेको थिएन र सिट खाली नै थियो . त्यो पानीको छिट्टा मलाई पर्यो र मैले साथीलाई फेरि सुनाए की त्यस्तो भयो । साथीलाई खुबै रिस उठेछ । उ पछाडि फर्की र कराई ‘के तिमि आफ्नो घरको बाथरुममा बसेको छौ ? यहाँ तिमीले जे गरिरहेछौ त्यसले हामीलाई असहज भैरहेको छ । तिमीले कुल्ला गरेर थुकेको पानीको छिट्टा हामीलाई परिरहेको छ ।
मैले देखे त्यो केटाले थोरै पनि लज्जित महशुस गरेन । उल्टो भन्यो ‘अ बसेको छु के गर्छेस .’
फेरि साथीले भनिन – ‘तिम्रो सिनेमा हल हो यो?’
केटाको उत्तर उस्तै आयो – ‘हो मेरो हाल हो .’
अचम्म तेतिबेला लाग्यो यति हुँदा पनि त्यहाँ हलमा भएका कोही केही बोलेनन् । हामीलाई के भयो भनेर कसैले सोधेनन् । मानौ की ती केटाहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा यो सब गर्ने छुट छ । हामी केटीहरुले उनीहरु जे गर्छन् सहनु पर्छ बोल्नु हुन्न । मलाई सिनेमामा ध्यान जानै सकेन । मनमा अनेकथरी प्रश्न वा बिचार मडारिन थाले । कतिबेला सिनेमा सकिएला झै भईरह्यो । आफु निरीह र कमजोर भएको महशुस समेत भयो ।
मलाई कमजोर बनाउने कारण थियो हामी दुबैजना नेपालगञ्जका थियौ । तुल्सीपुर हाम्रो ठाउँ थिएन । त्यहाँ हामीले बोलेको कुरा सुन्ने कोही थिएन । जब कुरा सुनिदैन भने बोलेर केही हुन्न उल्टो हामी नै दोषी देखिन्छौ । यस्तैयस्तै सोचाईले त्यो दिन त्यसपछीको समय सोचेजस्तो रमाईलो हुन सकेन ।
उता केटाको व्यवहार अलिकति पनि सुध्रिएन । त्यो केटाले फेरि पनि थुक्यो । पानी खाएर बोतल फल्यो ।उ संगैका साथीहरुले उसलाई केहि सम्झाएनन .
अर्को दिन मैले यो घटना मैले नजिक ठानेका अरुहरुलाई पनि सुनाए । तर अचम्म के भयो भने उनीहरुले पनि एकै आसयको उत्तर दिए की म र मेरी साथीलाई राम्री देखेर होला केटाहरु उत्साहित भएका रे । तर कुरा त्यस्तो थिएन । अध्याँरो हलमा ती केटाहरुले हामीलाई त्यसरी हेरेका थिएनन् की हामी राम्री थियौ । उनीहरु हामी पछाडि थिएँ । अनुरहार देख्ने कुरै थिएन । सिनेमा हलमा केटाहरुको व्यवहार । त्यही व्यवहारको बारेमा चिनेजानेकाहरुको अचम्मको प्रतिकृया ।
त्यसयता म निकै नै सोचमग्न छु । मेरो मनमा यस्ता प्रश्नहरुको लहर दौडिरहेको छ ।
त्यो केटाले बारम्बार बदमासी गरिरहँदा मैले किन केही बोलिन 'मैले किन केहि भन्न सकेन त्यो केटालाई ?
के म साच्चिकै डराएको थिएँ ?
के मैले पछि केही समस्या आउला की भनेर सबै कुरा सहेरै बसेको हो त ?
मैले बिरोध गर्न नसके पनि , के मैले मेरो साथीले गरिरहेको बिरोध रोक्नु उचित हुन्थ्यो?
अरुले यो घटना सुनेर दिएको प्रतिक्रिया सहि हो त?
के साच्चिकै केटि भएर जन्म लिए पछि यि सबै कुरा को सामना चुपचाप सहनु ठिक हो?
के हामी केटि भएकै कारणले गर्दा केटाहरुको नजरमा हाम्रो इज्जत र सम्मान छैन?
के सबै घटनाहरुलाई हासेरै उडाउनु सहि हो त ?
के सहि, के गलत ? सब कुरा कागजका पानामा र भाषणमा मात्र सिमित छन् । अरु सबै त भन्ने कुरा न हुन् । यहाँ कर्ही पनि सहि छैन साथै केही पनि गलत छैन । लाग्छ यो चक्रर यसरि नै चलि रहन्छ । सहनेले सहिरहनुपर्छ । भोग्नेले पिडा लुकाउनु पर्छ । उदण्ड र छाडा हर्कत गर्नेहरु सधैभरी त्यसै गरिरहन्छन् ।